I-Paxful Inc. IMIGOMO YESEVISI
Usuku Lokuqala Ukusebenza: Mashi 4, 2021
LESI SIVUMELWANO SIQUKETHE ULWAZI OLUBALULEKILE KAKHULU MAYELANA NAMALUNGELO WAKHO NEZIBOPHO, KANYE NEZIMO, IMIKHAWULO NOKUKHISHWA OKUNGASEBENZA KUWE. SICELA USIFUNDE KAHLE.
Le Migomo Yesevisi nezinye izinguquko nokufaka kabusha lapha (“Isivumelwano”) zenza isivumelwano sokumboza ukunikezwa kwamasevisi kuauka ku-Paxful kuya kuwe, kufaka phakathi ukunikezela indawo yokumaketha ukuvumela abathengi nabathengisi “Amafa Wedijithali” (lelo temu lizoqondwa ngokubanzi ukubandakanya izinhlobo zemali njenge-Bitcoin, Tether, nokunye, okusekelwa i-Paxful wallet) ukubandakanya kumisebenzi nomunye umuntu (“Indawo Yokumaketha”), ukunikezela amasevisi wewalethi yedijithali, ukubamba nokukhulula Amafa Wedijithali njengoba kuyaliwe ekuqedweni kokuthengwa Kwamafa Wedijithali namanye amasevisi achazwe kulesi Sivumelwano (ngokuhlangene “Amasevisi” futhi ngakunye, “Isevisi”) kunikezelwe i-Paxful, Inc. nawo wonke amanxusa wayo, kufaka phakathi kodwa akukhawulelwe ku-Paxful USA, Inc.(ngokuhlangene, “Paxful” noma “thina” noma “thina” noma “inkampani”) kuwe njengomuntu ngamunye (futhi kubhekiswa njengokuthi “umsebenzisi” noma “wena”). I-Paxful.com Namasevisi wayo aphathelene aphethwe futhi asetshenziswa i-Paxful. Ukusebenzisa kwakho Amasevisi kuzobuswa yilesi Sivumelwano, kanye nokuthi Inqubomgomo Yobumfihlo, Inqubomgomo Yamakhukhi, nemvume ye-E-Sign.
LE MIGOMO IDINGA UKUSETSHENZISWA KOKUPHIKISA UKUXAZULULA IZINGXABANO KUNESILINGO SOMTHETHO NOMA IZENZO ZEKLASI.
Ngokubhalisela ukusebenzisa i-akhawunti nge-paxful.com, noma amanye amawebhusayithi aphathelene, ama-API, noma izinhlobo zeselula, kufaka phakathi noma yimaphi ama-URL asetshenziswa i-Paxful (ngokuhlangene “Iwebhusayithi ye-Paxful” noma “Iwebhusayithi”), uyavuma ukuthi ufunde kahle, waqonda, futhi wamukela yonke imigomo nemibandela equkethwe kulesi Sivumelwano kufaka phakathi Inqubomgomo Yobumfihlo, Inqubomgomo Yamakhukhi, nemvume ye-E-Sign.
INANI LAMAFA WEDIJITHALI LINGAKHUPHUKA NOMA LEHLE FUTHI KUNGABA NOBUNGOZI OBUQINILE BOKUTHI ULAHLEKELWE IMALI UTHENGA, UTHENGISA, UBAMBA, NOMA UPHENYA NGAMAFA WEDIJITHALI. KUFANELE UNAKE KAHLE UKUTHI INGABE UKUHWEBA NOMA UKUBAMBA AMAFA WEDIJITHALI KUFANELEKILE KUWE ESIMWENI SAKHO SEZIMALI.
Mayelana ne-Paxful namaSevisi wayo
I-Paxful imakethe ye-peer-to-peer eholayo ukwenza ukuthenga nokuthengisa Kwamafa Wedijithali nabathengisi abamukela izindlela zokukhokha ezingaphezu kuka-300 ngokushintshana Kwamafa Wedijithali. Izindlela zokukhokha ziyaxoxiswana futhi zishintshwe ngesisekelo se-peer-to-phakathi kwabathengi Kwindawo Yokumaketha (“Abathengi”) nabathengisi Kwindawo Yokuthenga (“Abathengisi”). Abasebenzisi bethu bayavuma ukuthi yiziphi izindlela zokukhokha abangazisebenzisa ukuqedela umsebenzi nokubophezeleka ngokuphelele ekusebenziseni izindlela zokuthenga ngendlela esemthethweni.
I-Paxful futhi inikezela ngamasevisi wewalethi yedijithali asingathwayo ngomhlinzeki wewalethi wefa ledijithali eliholayo emhlabeni. Isisekelo sethu somsebenzisi somhlaba siyakwazi ukuthumela iminikelo yokuthenga noma yokuthengisa Amafa Wedijithali ngezindlela ezahlukahlukene. Umdali womnikelo ubophezelekile ukufaka kuhlu imigomo yomsebenzi, kufaka phakathi izindlela zokukhokha Umthengisi azamukelayo. Uma umnikelo ukhethwe ngomunye umsebenzisi we-Paxful, Amafa Wedijithali Womthengisi ayakhiywa njengengxenye yenqubo yethu yomsebenzi (lapho sibhekisela njenge-“Paxful Escrow”) kuzo zonke izimo ezidingekayo ukusebenzisa umsebenzi zenziwe. Ukuthengisa kuphelele futhi Amafa Wedijithali ayavulwa futhi akhululwe Kumthengi Ngomthengisi uma Umthengi eseqede imigomo yomsebenzi futhi ikhokhelo iqinisekisiwe futhi yamukelwa Umthengisi. I-PAXFUL AYISEBENZI NJENGESICUBUNGULI SENKOKHELO. KONKE UKUBOPHEZELEKA KOKUTHUMELA NOKWAMUKELA INKOKHELO NOKUQINISEKISA UKUVUMELEKA KWEMISEBENZI KUSALA PHAKATHI KOMTHENGI NOMTHENGISI. Amafa Wedijithali esiwakhiyayo ayakhululwa futhi kuMthengisi uma Umthengi ekhetha ukukhansela umsebenzi. Umthengisi akakwazi ukukhansela umsebenzi. Umthengisi unenketho kuphela yokuvula Amafa Wedijithali nokuwakhulula Kumthengisi. Lokhu okokuviekla Kumthengi. Uma Umthengisi engadinga ukukhansela umsebenzi ngenxa Yomthengi yokungalandeli imigomo yomsebenzi, kufanele baqale impikiswayo futhi banikezele ngesizathu sokwenza kanjalo njengoba kuchazwe Esigabeni 8 salesi Sivumelwano. Imisebenzi kuWebhusayithi yethu yenziwa phakathi Kwabathengi Nabathengisi. Ngokufanele, i-Paxful akuyona inhlangano kunoma yimuphi umsebenzi.
Isevisi yewalethi yohlobo lwemali lwedijithali olusingathiwe olunikezelwa i-Paxful kuyindlela evikelekile yokulondoloza, ukuthumela, nokwamukela uhlobo lwemali lwedijithali. I-Paxful ayilondolozi noma isingane Amafa Wedjithali. Amafa Wedjithali ahlala alondolozwa kumanethiwekhi wayo noma ama-blockchain. Yonke imisebenzi yohlobo lwemali ledijithali luvela ngaphakathi kwenethiwekhi yohlobo lwemali, hhayi ku-Paxful. Akukho ukuqinisekiswa ukuthi umsebenzi uzocubungula kunethiwekhi yohlobo lwemali lwedijithali. I-Paxful igodla ilungelo lokwenqaba ukucubungula umsebenzi uma kudingeka ngokomthetho noma uma kubonakala kumisebenzi ephikisana nemigomo nemibandela yethu kulesi Sivumelwano. Wamukela futhi wazisa ukuthi uthatha ukubophezeleka okuphelele kumisebenzi evela ngaphansi kwewalethi yakho futhi wamukela bonke ubungozi bokufinyelela okugunyaziwe kuwalethi yakho, kububanzi obukhulu kufika kumthetho.
Sigodla ilungelo lokushintsha, ukuhlaziya, ukuguqula noma ukubuyekeza lesi Sivumelwano noma kunini, ngenketho yethu ezimele futhi ngaphandle kwesaziso sangaphambilini. Noma yiziphi izinguquko ezinjalo ngokusebenzisa kwakho Amasevisi zizosenza uma zithunyelwa kuWebhusayithi ye-Paxful nokungasebenzi. Uma usinikezele ngekheli le-imeyili, futhi singakwazisa nge-imeyili ukuthi Isivumelwano sibuyekeziwe. Uma ungavumelani ngemigomo Yesivumelwano esibuyekeziwe, ukulungisa kwakho okukhethekile ukuphelisa ukusebenzisa kwakho Amasevisi futhi uvale i-akhawunti yakho.
Kuyisibopho sakho ukufundisisa kahle Isivumelwano nokubuyekeza lesi Sivumelwano njengoba sithunyelwe kuWebhusayithi ye-Paxful. Ukusebenzisa kwakho okuqhubekayo Kwamasevisi kuzokhombisa ukwamukela kwakho ukuthi uboshezelwe Isivumelwano amanje.
Ukwahluleka noma ukubambezeleka nge-Paxful ekuphoqeleleni noma ukuphoqelela kancane ukunikezwa Kwesivumelwano kuzobhekwa njengesisusi samalungelo wethu noma ukulungisa.
Ukuze usebenzise Amasevisi, uzodinga ukubhalisa i-akhawunti ngewebhusayithi. Phakathi kwenqubo yokubhalisa, sizokucela ulwazi oluthile, kufaka phakathi kodwa akukhawulelwe, igama lakho, ikheli nolunye ulwazi lomuntu ukuqinisekisa ubunikazi bakho. Singakwazi, ngokuzikhethela kwethu, ukwenqaba ukunakekela i-akhawunti kuwe. Lapha wamukela futhi wazisa ukuthi wena: (a) uneminyaka esemthethweni ukuvumelana nalesi Sivumelwano; futhi (b) awumisiwe ngaphambilini noma wasuswa ekusebenziseni Amasevisi wethu.
Ngokusebenzisa i-akhawunti yakho, uyavuma futhi wethula ukuthi uzosebenzisa Amasevisi wethu ngokwakho futhi ngeke usebenzise i-akhawunti yakho ukusebenza njenge-broker kwenye inhlangano yangaphandle, umuntu noma ibhizinisi. Ngaphandle kokuthi kugunyazwe i-Paxful, uvunyelwe kuphela ukuba ne-akhawunti eyodwa futhi awuvunyelwe ukuthengisa, ukuboleka, ukwabelana noma ukwenza i-akhawunti yakho itholakale ukufinyelela kubani noma amabhizinisi ngaphandle kwakho. Ubophezelekile ukunakekela ukuphepha okufanele nokulawula wonke amagama womsebenzisi, amaphasiwedi, amakhodi wokugunyaza kokuphepha noma amanye amakhondi noma imininingwane yokungena owasebenzisayo ukufinyelela Amasevisi. I-akhawunti yakho akufanele iqukathe ulwazi olulahlekisayo noma lobugebengu. Ukudala ulwazi olungelona iqiniso, ukukhohliswa izwe lakho lesiyingi noma ukunikezela ngolwazi lobugebengu, ukukhohlisa amadokhumenti wobunikazi wezwe lakho kuvinjelwe.
Phakathi nokubhaliswa kwe-akhawunti yakho, uyavuma ukusinikezela ngolwazi esilucelayo ngezinhloso zokukhomba nokubizelwa kokuhlanzwa kwemali, ukunikeza amaphekula imali, ubugebengu, noma obunye ubugebengu bezezimali futhi usivumela ukuthi sigcine irekhodi lolwazi olunjalo. Uzodinga ukuqedela izinqubo ezithile zokuqinisekisa ngaphambi kokuthi uvunyelwe ukusebenzias Amasevisi, lapho izinqubo zingashintshwa ngenxa yolwazi oluqoqwayo ngawe ngokuqhubekayo. Ulwazi esilucelayo lungabandakanya imininingwane yomuntu, okufaka phakathi, kodwa kungakhawulelwe, igama lakho, ikheli inombolo yocingo ikheli le-imeyili, usuku lokuzalwa, inombolo yezenhlala, inombolo yentela, nobunikazi bukahulumeni. Ukusinikezela ngalolu lwazi noma olunye ulwazi olungadingeka, uyaqinisekisa ukuthu lonke ulwazi luyiqiniso, luqondile futhi alulahlekisi. Uyavuma ukugcina usazisa uma olunye ulwazi lushintsha. USIGUNYAZA UKUTHI SIBUZE, NGOKUQONDILE NOMA NGOKUNGAQONDILE NGEZINHLANGANO ZANGAPHANDLE, UKUTHI SINAKA KUBALULEKILE UKUQINISEKISA UBUNIKAZI BAKHO UKUVIKELA WENA KANYE/NOMA THINA EBUGEBENGIWINI NOMA OBUNYE UBUGEBENGU BEZEZIMALI, NOKWENZA OKUTHILE ESIBONA KUDINGEKA NGOKUSUSELWE KUMIPHUMELA YEMIBUZO ENJALO, UYAZISA FUTHI UYAVUMA UKUTHI ULWAZI LWAKHO LUNGADALULWA UKUREFERENSA IKHREDITHI NOKUVIKELWA KOBUGEBENGU NOMA UBUGEBENGU BEZEZIMALI NOKUTHI ABASEBENZELI BANGAPHENDULA EMIBUZWENI YETHU NGOKUPHELELE.
Uma usebenzisa Amasevisi engxenyeni yebhizinisi lomthetho njengebhizinisi, umela ngokuthuthukile futhi uyaqinisekisa ukuthi: (i) ibhizinisi lomthetho lihleleke kahle futhi likhona ngaphansi kwemithetho esebenzayo yenhlangano; futhi (ii) ugunyazwe ibhizinisi lomthetho ukwenza engxenyeni yayo. I-akhawunti yebhizinisi eliqinisekisiwe iqondile kulelo bhizinisi futhi ingasetshenziswa umuntu oyibhalisile. Ama-akhawunti webhizinisi awavunyelwe ukwabiwa noma asetshenziswe ngabanye abantu noma amanye amabhizinisi. Ama-akhawunti webhizinisi aqinisekisiwe avunyelwe ukukhishwa okukhawulelwe okulandelayo:
I-akhawunti yebhizinisi evunyiwe ingaba nama-akhawunti ambalwa womsebenzisi osebenzayo noma kunini, uma nje kokuthi bonke baqinisekiswe inkampani futhi isetshenziswa abasebenzi benkampani leyo abadalulwe futhi bavunywa i-Paxful ngokuthanda kwayo.
Ama-akhawunti ebhizinisi angaba nomnikelo osebenzayo owodwa ngomsebenti othile noma kunini futhi abavunyelwe ukuba neminikelo eminingi ngomsebenzi othile kusuka kuma-akhawunti wabo webhizinisi.
Ubophezelekile ukudala iphasiwedi eqinile nokunakekela ukuvikela okufanele futhi ulawule wonke ama-ID, amaphasiwedi, amahinti, izinombolo zobunikazi zomuntu (PINs), okhiye be-API noma amanye amakhodi owasebenzisayo ukufinyelela Amasevisi wethu. Noma yikuphi ukulahleka noma ukufakwa engcupheni kolwazi oluqhubekayo kanye/noma ulwazi lomuntu lwakho lungaholela ekufinyeleleni okugunyaziwe ku-akhawunti yakho ngezinhlangano zangaphandle kanye nokulahleka noma ubugebengu Bamafa Wedijithali kanye/noma izimali eziphathelene ne-akhawunti yakho, kufaka phakathi izindlela zakho zokukhokha ezixhunyiwe. Ubophezelekile ukugcina ikheli lakho le-imeyili, inombolo yocingo neminye imininingwane yokuxhumana isesikhathini samanje kuphrofayela ye-akhawunti yakho ukuze uthole izaziso noma izexwayiso esingazithumela kuwe. Akufanele uvumele ukufinyelela kwerimothi noma ukwabelana ngesikrini sekhompyutha nomunye uma ungene ku-akhawunti yakho. Asithathi isibopho sokulahleka ongakuthola ngenxa yokufakwa engozini kwemininingwna yakho yokungena okungabhekene ne-Paxful futhi/noma ukwahluleka ukulandela noma ukuthatha isinyathelo kuzaziso okungenzeka sikuthumele zona.
Ukuze usebenzise Amasevisi ongadinga ukugcwalisa izibopho ezweni lakho kanye/noma izwe lokuhlala. Ngokwamukela le migomo kulesi Sivumelwano, uyaqinisekisa ukuthi ubuyekeze imithetho yendawo nokulawula okuqaphelayo, futhi ugcwalisa izibopho ezinjalo. Ngenxa yokuvikela komthetho nokulawula, asinikezeli ngokusetshenziswa kokuthi Amaevisi wethu kwezinye izindawo. Ngokwamukela imigomo yalesi Sivumelwano, uyaqinisekisa ukuthi awuyena umhlali noma awubuswa imithetho nokulawula kwalezi zindawo.
Asikwazi ukwenza wonke Amasevisi atholakale kuwo wonke amamakethe nemikhawulo futhi singakhawulela noma sinqabele ukusetshenziswa kwengxenye noma wonke Amasevisi kusuka kweminye imikhawulo (“Izikhawo Ezikhawulelwe”). Ngalesi sikhathi, Izindawo Ezikhawulelwe zibandakanya lezo ezikhonjwe kokuthi “Uhlu Lwamazwe Avinjelwe”, kany ene-States of Washington ne-New York. Ngokungeziwe, Amasevisi awatholakali ngokuya ngohlobo lwemali yedijithali, i-Tether (USDT), kubasebenzisi abahlala e-State of Texas. Akufanele uzame ukusebenzisa Amasevisi wethu uma uhlala lapho Ezindaweni Ezikhawulelwe. Akufanele uzame ukudlula imikhawulo ebekiwe ngaMasevisi, njengokufihla ikheli lakho le-IP noma ukuhambisa ulwazi olungaqondile mayelana nendawo yakho.
AMANDLA WEZOMTHETHO, UKUPHIKISA NOKUSEBENZELA
Lesi Sivumelwano kanye nokusebenzisa kwakho iWebhusayithi Namasevisi kuzobuswa futhi kutolikwe ngokuya nge-State of Delaware, ngaphandle kokunaka imithetho yokushayisana.
Ukuphikisa. Wena ne-Paxful niyavumelana ukuthi noma yikuphi ukungavumelani okuvelayo okuvela noma okuphathelene nalesi Sivumelwano noma Amasevisi, kuzoqedwa ngokuphikisana okubophezelayo, ngomuntu ngamunye, ngokuya ngemithetho ye-American Arbitration Association yokungavumelani yokuphikisa okuphathelene nomsebenzisi (kufinyeleleka ku-https://www.adr.org/rules). Ngokuya ngezimfuneko zamandla omthetho, izimangalo zomsebenzisi (umuntu ngamunye loyo umsebenzi wakhe ohloselwe ukusebenzisa komuntu, umndeni, noma ukusebenzisa kokwasendlini) ningakhetha ukuqalisa izimangalo enkantolo yezimangalo ezincane zendawo kunokuphikisana uma nje indaba yakhona ihlala kwinkantolo yezimangalo ezincane futhi kuqhubekela kuphela kumuntu ngamunye (okungekhona kweklasi noma okungekhona kokumela).
ISISUSI SESENZO SEKLASI: KUFIKA LAPHO KUVUNYELWE NGOKOMTHETHO, ZONKE IZIMANGALO ZIZOLETHWA KUMUNTU NGAMUNYE, FUTHI HHAYI NJENGOMUNTU OLETHA ISIMANGALO ENKANTOLO NOMA ILUNGU LEKLASI EKLASINI ELINGATHATHU UHLANGOTHI, ISENZO SANGOKUHLANGENE, NOMA UKUQHUBEKA KOMELAYO (NGOKUHLANGENE “ISISUSI SESENZO SEKLASI”). OPHIKISAYO AKAKWAZI UKUHLANGANISA IZIMANGALO ZOMUNTU ODLULA KOYEDWA NOMA ABANDAKANYEKE EKUPHIKISANENI KWEKLASI. UYAZISA UKUTHI, NGOKUVUMELANA NGALE MIGOMO, WENA NE-PAXFUL NISUSA ILUNGELO LESILINGO NGESAHLULELO FUTHI NISUSA ILUNGELO LOKUBAMBA IQHAZA ESENZWENI SEKLASI KU-PAXFUL.
i-The Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. §§ 1-16, isebenza ngokuphelele ekuphikisaneni. Ukuphikisana kuzokwenziwa umphikisi oyedwa ongathathi uhlangothi futhi kuzokwenzeka e-State of Delaware, noma enye indawo okuvumelwene ngayo, ngolwimi lwe-English. Ophikisayo anganika noma yikuphi ukukhulula lokho inkantolo yesiphathimandla esifanele anganika umklomelo, kufaka phakathi izindleko zomshushisi uma kugunyazwe umthetho, futhi isinqumo sokuphikisana kungangenwa kuso njengesahlulelo futhi siphoqelelwe kunoma iyiphi inkantolo yezomthetho. Esicelweni sakho, ukuzwa kungenziwa ngomuntu noma ngocingo futhi ophikisayo anganikezela ngokucaciswa kokunyakazayo kuzifinyezo, ngaphandle kokuzwa. Inhlangano evelayo kunoma isiphi isenzo noma ekuqhubekeni ukuphoqelela lesi Sivumelwano kuzodingeka ukuthi ikhokhele izinkokhelo zabashushisi.
Uma ophikisayo noma abaphikisayo/abaphikisayo noma umqondisi wokuphikisa engafaka izindleko zokugcwalisa noma zokuqondisa kuwe, sizokunxephezelisa, uma ucela, kufika lapho izinkokhelo noma izindleko zidlula lezo okufanele ukuthi uzikhokhele uma ubukade uqhubeka enkantolo. Futhi sizokhokha izinkokhelo noma izindleko ezingeziwe uma kudingeka ukuthi senze kanjalo ngemithetho yomqondisi wokuphikisa noma umthetho osebenzayo. Ngaphandle kokuqhubeka, inhlangano ngayinye izobophezeleka ezinkokhelweni noma izindleko, njengezinkokhelo zomshushisi lezo inhlangano engazithwala.
Uma enye ingxenye yalesi Sivumelwano ibanje ophikisayo noma inkantolo yase-United States ukuthi ayivumelekile noma ayiphoqeleleki yonke noma ingxenye, ukuvumeleka noma ukuphoqelela lwezinye izingxenye zale migomo nemibandela ngeke ithinteke. Noma yiziphi izihloko eziqhkethwe kulesi Sivumelwano kungezenhloso zolwazi kuphela futhi akukhona ukunikeza okuphoqelelekayo kwalesi Sivumelwano.
INQUBOMGOMO YOBUMFIHLO NOKUPHEPHA
Sizama ukuthatha zonke izinyathelo ezibonakalayo ukuvikela ulwazi lwakho lomuntu. Kodwa, asikwazi ukuqinisekisa ubumfihlo benye idatha oyidalula ku-inthanethi. Wamukela ubungozi obutholwayo bokunikezela ngolwazi namadili ku-inthanethi futhi ngeke sibophezeleke ukuphulwa kokuphepha ngaphandle kokuthi lokhu kungukungaqapheli kwethu.
Sicela ubuke isitatimende sethu sobumfihlo esisethethweni: https://paxful.com/privacy.
AKUKHO UKUQINISEKISA, UMKHAWULO WESIBOPHO NOKUCABANGELA KOBUNGOZI
AMASEVISI ANIKEZELWA KOKUTHI “NJENGOBA KUNJALO” NOKUTHI “NJENGOBA KUTHOLAKALA” NGAPHANDLE KWEZIQINISEKISO, UKUMELA NEZIQINISEKISO, NOMA NGABE KUPHOQELELWE, KUFAKIWE NOMA KUMISIWE. KUFIKA EZINGENI ELIKHULU ELIVUNYELWE UMTHETHO OSEBENZAYO, I-PAXFUL IZETHULA UMTHWALO KUNOMA YIKUPHI UKUQINISEKISA OKUFAKIWE KWESIHLOKO, UKUTHENGISA, UKUFANELEKA KWENYE INHLOSO KANYE/NOMA UKUNGAPHULI. I-PAXFUL AYENZI UKUMELA, NOMA IZIQINISEKISO ZOKUFINYELELA KUWEBHUSAYITHI, ENYE INGXENYE YALAWA MASEVISI, NOMA EMINYE IMISEBENZI EQUKETHWE LAPHO, IZOQHUBEKA, NGOKUNGAPHAZAMISEKI, OKWESIKHATHI, NOMA OKUNGENAPHUTHA. I-PAXFUL AYIBOPHEZELEKILE EKUPHAZAMISENI NOMA UKULAHLEKA UMSEBENZISI ONGAHLANGABEZANA NAKHO. UYAZISA FUTHI UYAVUMA UKUTHI AWUNCIKILE KUSITATIMENDE NOMA UKUQONDA OKUBALIWE NOMA OKUSHIWOYO, NGOKULANDELA UKUSEBENZISA KWAKHO NOKUFINYELELA AMASEVISI NAMAWEBHUSAYITHI. NGAPHANDLE KOKUKHAWULELA UKUQHUBEKA, UYAZISA FUTHI WAMUKELA UBUNGOZI OBUHLUKAHLUKENE BOKUSEBENZISA UHLOBO LWEMALI LWEDIJITHALI KUFAKA PHAKATHI KODWA AKUKHAWULELWE EKWAHLULEKENI KWEHADIWE, IZINKINGA ZESOFTHIWE, UKWAHLULEKA KOXHUMO LWE-INTHANETHI, UBUNGOZI BESOFTHIWE, UKUNGENELELA KWENKAMPANI YANGAPHANDLE EHOLELA EKULAHLEKENI NOMA UKUNGAFINYELELI KU-AKHAWUNTI YAKHO NOMA IWALETHI NEMINYE IMINININGWANE UKWAHLULEKA OKUKHULU NOMA UKULAHLEKA KWEDATHA. WAMUKELA FUTHI UYAZISA UKUTHI I-PAXFUL NGEKE IBOPHEZELEKE KOKUNYE UKWAHLULEKA KOKUXHUMANA, UKUPHAZAMISA, AMAPHUTHA, UKUPHAZAMISA NOMA UKUBAMBEZELEKA ONGAHLANGABEZANA UMA USEBENZISA AMASEVISI, OKUBANGELWE.
ASIKHO ISIMO LAPHO I-PAXFUL, AMANXUSA WAYO NABAHLINZEKI BESEVISI, NOMA BAMAHHOVISI, ABAQONDISI, ABASEBENZELI, ABASEBENZI, ABAYALELI, ABAXHUMANISI NOMA ABAMELI, BAZOBOPHEZELEKA (A) KWELINYE INANI ELINGAPHEZU KWENANI LEZINKOKHELO EZIKHOKHELWE NGUWE KUSEVISI EYIMBANGELA YESENZO EZINYANGENI EZIYISHUMI NAMBILI (12) NGAPHAMBI KOKULAHLEKA OKUVELAYO NOMA (B) EZINYE IZINZUZO ZOKULAHLEKA, UKWEHLA KWIVELU NOMA ITHUBA LEBHIZINISI, NOMA YOKUPHI UKULAHLEKA, UKULIMALA, UBUGEBENGU NOMA UKWAPHULWA KWEDATHA NOMA ENYE INDAWO ENGAFANELEKI NOMA EKHETHEKILE, EYINGOZI EQONDILE ENGAFANELEKILE, UKUBOPHEZELEKA OKUQINILE, NOMA OKUNYE OKUVELA NGOKUXHUMANA NOKUSEBENZA OKUGUNYAZIWE NOMA OKUNGAGUNYAZIWE KWE-PAXFUL KUYALELIWE NOMA BEKWAZIWA NOMA BEKUFANELE KWAZIWE NGOKUNGENZEKA KOKULIMALA OKUNJALO, NOKUMELANA NOKWAHLULEKA OKUVUMELWENE NOMA OKUNYE UKULUNGISA KWENHLOSO YAYO EBALULEKILE, NGAPHANDLE KWESIMO SOKUGCINA SEJAJI UKUTHI UKULIMALA KUVELA EKUNGANAKENI KWE-PAXFUL, UBUGEBENGU, UKUNGASEBENZI KAHLE NGENHLOSO NOMA UKWAPHULWA KOMTHETHO OKUHLOSIWE. EMINYE IMITHETHO AYIVUMELI UKUKHISHWA NOKUKHAWULELWA KWESENZO NOMA UKULIMALA KOMPHUMELA, UKUZE UMKHAWULO ONGENHLA UNGASEBENZI KUWE.
Asiphathi noma silauwle amaphrothokholi ayisisekelo wesofthiwe abusa umsebenzi we-Digital Assets. Ngokuvmaile, amaphrothokholi ayisisekelo angumthombo ovulekile, noma ubani angawasebenzisa, awakopishe, awashintshe, futhi awasabalalise. Asithathi isibopho somsebenzi kumaphrothokholi ayisisekelo futhi asikwazi ukuqinisekisa ukusebenza noma ukuphepha kokusebenza kwenethiwekhi. Empeleni, amaphrothokholi angakhonjelwa kuzinguquko ezisheshayo emithethweni yokusebenza (kufaka phakathi ama-“fork”). Noma yiziphi izinguquko zokusebenza zingathinta ukutholakala, ivelu, umsebenzi kanye/noma igama lohlobo lwemali elinjalo. I-Paxful ayilawuli isikhathi nezici zalezo zinguquko zokusebenza. Kuyisibopho sakho ukuzenza ukuthi uqaphele ngezinguquko zokusebenza ezizayo futhi kufanele unake ulwazi olutholakalayo esidlangalaleli nolwazi olunganisekezelwa i-Paxful ekucaciseni ukuthi ingabe ungaqhubeka nokusebenzisa Amasevisi. Esimweni senguquko yokusebenza enjalo, i-Paxful igodla ilungelo ukuthatha izinyathelo njengoba zingabaluleka ukuvikela ubumfihlo nokuphepha kokusebenza kwenkudla, kufaka phakathi ukumisa kwemisebenzi ngezinhlobo zemali zedijithali, nezinye izinyathelo ezibalulekile. I-Paxful izosebenzisa amandla wayo ukunikezela ngesaziso sempendulo yayo enguqukweni yokusebenza; kodwa, izinguquko ezinjalo zingaphandle kokulawula kwethu futhi zingavela ngaphandle kokwazisa i-Paxful. Impendulo yethu enguqukweni yokusebenza ingokuzikhethela futhi ibandakanya ukunquma ukungasekeli i-fork entsha noma ezinye izenzo. Uyazisa futhi wamukela izingozi zezinguquko zobungozi kumaphrothokholi we-Digital Assets futhi uyavuma ukuthi i-Paxful ayibophezelekile kuzinguquko zokusebenza ezinjalo futhi ayibophezelekile ekulahlekeni kwevelu ongahlangabezana nalo njengmophumela wenguquko enjalo kumithetho yokusebenza. Uyazisa futhi uyavuma ukuthi i-Paxful inokuzikhethela ukucacisa impendulo yayo emisebenzini nokuthi awunasibopho sokukusiza ngohlobo lwemali olungasekelwa noma amaphrothokholi.
Ekusebenziseni Amasevisi wethu, ungabuka okuqukethwe noma usebenzise Amasevisi anikezelwe izinkampani zangaphandle, kufaka phakathi ama-hyperlinks kumawebhusayithi namasevisi wezinkampani ezinjalo (“3rdkwenhlangano okuqukethwe”). Asincomi, sithathe noma silawule 3rd kwenhlangano okuqukethwe futhi asibi nesibopho 3rd sokuqukethwe kwenkampani. Ngokungeziwe, amadili wakho nokuxhumana nezinkampani zangaphandle ezinjalo kuphakathi kwakho nezinkampani zangaphandle. Asibophezelekile noma asithathi isibopho sokulahleka noma ukulimala okuvelayo njengomphumela wamadili anjalo futhi uyaqonda ukuthi ukusebenzisa kwakho 3rd okuqukethwe kwenkampani, nokuxhumana kwakho nezinkampani zangaphandle, kuyingcuphe yakho.
Ngokugwema ukungaqinisekisi, i-Paxful ayinikezeli ngotshalomali, intela, noma umyalo wezomthetho. I-Paxful ayibhalisiwe ne-U.S. Securities ne-Exchange Commission futhi ayinikezeli ngamasevisi wezokuphepha noma umyalo wotshalomali. Yonke imisebenzi ngendawo yethu yokumaketha yenziwa ngesisekelo sontanga phakathi Komthengisi Nomthengi futhi ubophezelekile ukucacisa ukughi ingabe utshalomali noma icebo lotshalomali noma umsebenzi onjalo ukulungele ngokususelwe kuzinhloso zotshalomali, izimo zezimali nokubekezelela ubungozi. Kufanele uxhumane nomsebenzi wezomthetho noma wentela ngesimo sakho. Njalo ngesikhathi, singanikezela ngolwazi lwezemfundo ngengxenyekazi yethu nemikhiqizo, ukusiza abasebenzisi ekufundeni kabangi Ngamasevisi wethu. Ulwazi lungabandakanya, kodwa alukhawulelwe, kumaphosti webhulogi, ama-athikili, izixhumanisi 3rd kokuqukethwe kwenkampani, okuphakelayo kwezindaba, namavidiyo. Ulwazi olunikezelwe kuWebhusayithi noma amanye amasayithi wezinkampani zangaphandle akuhlanganisi umyalo wotshalomali, umyalo wezezimali, umyalo wokuhweba, noma omunye umyalo, futhi akufanele uphathe okuqukethwe kweWebhusayithi okunjalo. Ngaphambi kokwenza isinqumo sokuthenga, sokuthengisa noma sokubamba Amafa Wedijithali, kufanele wenze lwakho ucwaningo futhi uxhumane nabayaleli bakho bezezimali ngaphambi kokwenza isinqumo sotshalomali. I-Paxful ngeke ibophezeleke ezinqumeni ozenzayo zokuthenga, zokuthengisa noma ukubamba Amafa Wedijithali ngokususelwe kulwazi olunikezelwe i-Paxful.
Uyavuma ukuthi asibophezelekile ekuguqukeni kwezintengo Kumafa Wedijithali. Esimweni sokuphazamiseka kwemakethe noma esimweni se-Force Majeure (njengoba kuchaziwe Esigabeni 17), singenza okukodwa noma okuningi kokulandelayo: (a) simise ukufinyelela Kumasevisi; noma (b) sikugweme ekugcwaliseni izenzo Ngamasevisi. Ngeke sibophezeleke ekulahlekelweni kwakho okuvela kulezo zenzo. Ukulandela esinye isimo esinjalo, uma Amasevisi aqhuba futhi, uyazisa ukuthi amanani wemakethe avelayo angahluka kakhulu kusuka kumanani atholakalayo ngaphambi kwesimo esinjalo.
Asenzi ukuqinisekisa kokuthi iWebhusayithi, noma iseva eyenza kutholakale, akunakho amagciwane noma amaphutha, ukuthi okuqukethwe kwakhona kuqondile, ukuthi ngeke kuphazamiseke, noma ukuthi amaphutha azolungiswa. Ngeke sibophezeleke kuwe nganoma yikuphi ukulahleka kolunye uhlobo, kusuka esenzweni esithethwe, noma esithethwe ngokuncika emsebenzini, noma ulwazi oluqukethwe kuWebhusayithi.
UKUKHISHWA KWE-PAXFUL NE-INDEMNITY
Uma unesiphikiso nomsebenzisi oyedwa noma ngaphezulu bamaSevisi wethu, ukhulula i-Paxful, amanxusa wayo nabahlinzeki besevisi, nabameli bamahhovisi, abaqondisi, abaqashi, abasebenzeli, nabameli, kusuka kwezinye izimangalo, izimfuneko noma ukulimala (empeleni nangomphumela) wolunye uhlobo noma isimo esivela ngenye indlela exhumekile ngeziphikiso ezinjalo. Uyavuma ukunxephezela futhi ubambe i-Paxful, amanxusa wayo nabasebenzi basehhovisini, bangalimali esimangalweni noma imfuno (kufaka phakathi izinkokhelo nezindleko zabahluleli, izinkokhelo noma izinhlawulo ezibekwe isiphathimandla sokulawula) ezivela ekwaphulweni kwalesi Sivumelwano okuhlobene noma ukwaphulwa komunye umthetho, ukulawula, noma amalungelo wenkampani yangaphandle.
IMISEBENZI ENDAWENI YOKUMAKETHA YE-PAXFUL
Iwebhusayithi ivumela abasebenzisi ukukhomba iminikelo ukuze ithenge noma ithengise Amafa Wedijithali.
Uma umsebenzisi eqalisa umsebenzi wokuthenga okunjalo noma ukuthengiswa Kwamafa Wedijithali, umsebenzi ususelwe kulesi Sivumelwano futhi emigomeni engeziwe, uma ikhona, efakwe imininingwane ngomsebenzisi noma inhlangano ephikisayo yomsebenzisi. Umhlahlandlela wesinyathelo ngasinye ekuthengeni nokuthengiseni Amafa Wedijithali ku-Paxful Marketplace ungatholakala ku-https://paxful.com/support/en-us/categories/360000409494-How-to-Buy-and-Sell.
Imigomo evamile elandelayo isebenza kumsebenzi ngamunye ochazwe ngezansi:
Ukuthenga Amafa Wedijithali ngokukhomba umnikelo.
Uma sithenga Amafa Wedijithali Endaweni Yokumaketha ye-Paxful:
Azikho izinkokhelo ku-Paxful Escrow njengengxenye yomsebenzi ezikhokhwayo Abathengi Kwindawo Yokumaketha yethu.
Iminikelo kusuka ezinhlanganweni eziphikisayo ze-Paxful inemigomo nemibandela yayo futhi omunye nomunye umnikelo uzohluka ngezinga lokushintshana, isivinini sokushintshana, neminye imigomo nemibandela ebekwe uMthengisi. Ngokwamukela umnikelo woMthengisi uyavuna ukuboshezelwa imigomo nemibandela yalowo mnikelo. Imigomo nemibandela ecaciswe uMthengisi ivumeleke kuzo zonke izimo ngaphandle kwalapho inkontileka ishayisana noma yephula lesi Sivumelwano, isemthethweni, ayizwakali noma kulukhuni ukuthobelana nayo (njengoba kucacisiwe esinqumeni esizimele se-Paxful), noma uma bobabili abasebenzisi bomsebenzi bayavuma ukushintsha imigomo nemibandela yalowo mnikelo. KUYISIBOPHO SAKHO UKUFUNDISISA KAHLE IMIGOMO NEMIBANDELA YOMNIKELO WOMTHENGISI NOKUYILANDELA NGOKUQONDILE. UMA UNGALANDELI IMIGOMO NEMIBANDELA YOMNIKELO, INKOKHELO YAKHO NGEKE YAMUKELWE. UNGALOKOTHI UHAMBISE INKOKHELO NGAPHANDLE KOKUTHI ULANDELE YONKE IMIGOMO NEMIBANDELA EFAKWE KUHLU KUMNIKELO. UMA UHAMBISA INKOKHELO NGAPHANDLE KOKULANDELA IMIGOMO NEMIBANDELA, I-PAXFUL AYIKWAZI UKUKUSIZA ENQUBENI YOKUPHIKISA UKUTHOLA INKOKHELO YAKHO.
Ukuqinisekiswa kwenkokhelo nokunikezela ngemiyalo ukuvula Amafa Wedijithali kusuka ku-Paxful kuyizibopho ezizimele zoMthengisi futhi hhayi ze-Paxful. Uma uMthengisi engakhululi Amafa Wedijithali kuwe ekuqedeleni okufanele kwemigomo nemibandela yoMthengisi, bika ngokushesha inkinga ngenkinobho yokuphikisa efanele ngaphakathi kwengxoxo yomsebenzi ethile. Usekelo lwe-Paxful luzobuyekeza futhi luqede isiphikiso. Inqubo yokuxazulula isiphikiso ichazwe kabanzi ngezansi kokuthi “Isigaba 8 - Disputing Transactions Via Paxful’s Dispute Resolution Process.” Uma ungalandeli inqubo yokuxazulula isiphikiso, i-Paxful ngeke ikwazi ukukusiza ngale nkinga.
Ukuthengisa Amafa Wedijithali
Uma uthengisa Amafa Wedijitali Endaweni Yokumaketha ye-Paxful:
Abathengisi kufanele bacacise futhi bacubungule inkokhelo ngenani eliqondekayo lesikhathi, futhi ngaphakathi kwenani elithile lesikhathi elicaciswe kumigomo yenkokhelo. Uma uMthengi esehambise inkokhelo kuwe ngokuya ngemigomo yomnikelo, kungumsebenzi wakho ukuqinisekisa nokucubungula inkokhelo futhi uvule Amafa Wedijithali kusuka ku-Paxful Escrow bese ukhulule kuMthengi. Uma ungalandeli imiyalo kumnikeo, ngeke ukwazi ukubuyisela Amafa Wedijithali akhiyiwe.
NjengoMthengis wamukela bonke ubungozi nezibopho zokunye ukwaphulwa kwalesi Sivumelwano ezivelayo ngokuthengiswa kwaMafa Wedijithali. Zonke izintela okufanele zikhokhelwe kungumsebenzi wakho. I-Paxful ikhokhisa inkokelo kuwe njengoMethengisi waMafa Wedijithali ngokuvula Amafa Wedijithali ku-Paxful Escrow kukhonjelwe ekuthengiseni. Ngaphandle kokuthi kucaciswe ngenye indlela inketho ezimele ye-Paxful, i-Paxful ngeke inxephezelise ukulahlekelwa kuMthengisi noma ngabe ukwaphulwa kwalesi Sivumelwano, ubugebengu noma okunye futhi inkokhelo yethu ngeke ibuyiselwe imali ngaphansi kwezinye izimo.
Noma iyiphi inkokhelo etholiwe kufanele icubungulwe ngokuphelele futhi iqinisekiswe njengokuthi itholiwe nguwe ngaphambi kokuvula Amafa Wedijithali kusuka ku-Paxful Escrow. I-Paxful ayibophezelekile ekulahlekelweni kwakho uma uvula Amafa Wedijithali ngesikhathi esingafanele ngaphambi kokuthi inkokhelo iqinisekiswe kahle futhi itholwe nguwe. Kufanele uqaphele kakhulu futhi uphendule uMthengi wakho. Kufanele uyekise ukusebenza eminye iminikelo engasebenzi.
Noma yikuphi ukukhangisa kwewebhusayithi yakho kwesinye isigaba seNdawo Yokumaketha ye-Paxful (njenge-bio yakho, imigomo yomnikelo noma ingxoxo yomsebenzi) engenza ukuthenga noma ukuthengiswa kwaMafa Wedijithali ngaphandle kwaMasevisi we-Paxful akuvunyelwe. Ezimweni ezikhawulelwe, kuyavumeleka ukwabelana ngewebhusayithi yakho edalwe ngokuzimela yokuthi uMthengisi athole inkokhelo ukuze aqedele umsebenzi (okungukuthi, ikhadi ledebhithi/lekhredithi lenkampani yangaphandle) emiyalweni yomsebenzi; ngaphandle kokuthi ukusetshenziswa okunjalo kwamawebhusayithi wangaphandle kucacisiwe kumigomo futhi amawebhusayithi acacisiwe kumigomo yomnikelo futhi amawebhusayithi anjalo akufanele aqukathe ezinye izikhangiso noma ulwazi lwakho louxhumana.
I-Paxful kanye namaSevisi akuxhumene noma akuhlobene, futhi awanconyiwe noma awaxhasiwe ngenye inhlangano yangaphandle, kufaka phakathi kodwa akukhawulelwe kokhipha ikhadi lesipho. Izimpawu zokuhweba, amabrendi, nezinye izihlonzi kuyindawo ezimele yabanikazi. I-Paxful naMasevisi wayo ayinconyiwe, ayixhasiwe, ayihlobene, noma ayixhumani ngenye indlela noma nabanikazi abanjalo.
I-Paxful akuyena umthengisi wekhadi lesipho onelayisensi noma umthengisi ogunyaziwe womkhiphi wekhadi lesipho. Noma yimaphi amakhadi wesipho owatholayo ngqo kusuka kumsebenzisi usebenzisa Indawo Yokumaketha ye-Paxful ikhonjelwe kumigomo nemibandela yomthengisi wenkampani yangaphandle lowo osebenzisekayo (“Umkhiphi”). I-Paxful ayibophezelekile ukwenza noma ukususwa komkhiphi, noma izinkokhelo, izinsuku zokuphela, izinhlawulo noma imigomo nemibandela ephathelene nekhasi lesipho lomkhiphi elitholwe kusetshenziswa Indawo Yokumaketha ye-Paxful. Ngokwamukela ikhadi lesipho kusuka kumsebenzisi, uyazisa ukuthi ufundile imigomo nemibandlela yekhadi lesipho, futhi umela ku-Paxful ukuthi ufanelekile ukusebenzisa amakhadi wesipho ngaphansi kwemigomo nemibandela yomkhiphi wekhadi, noma ngaphansi kwomthetho osebenzayo.
UKWAPHULA NOMA UKUTHENGISWA KABUSHA KWAMAKHADI WESIPHO KUKHAWULELWE KUWEBHUSAYITHI YETHU NENDAWO YOKUMAKETHA. KUFANELE UBE UMNIKAZI OFANELE WEKHADI LESIPHO FUTHI ESICELWENI SE-PAXFUL UYAVUMA UKUNIKEZELA NGESIQINISEKISO ESIFANELE SOBUNIKAZI BEKHADI LAKHO LESIPHO (NJENGERESIPHU). I-PAXFUL AYENZI IZIMANGALO, UKUMELA NOMA UKUQINISEKISA UKUTHI IZINDLELA ZOKUKHOKHA ZENKAMPANI YANGAPHANDLE KUWEBHUSAYITHI ZIVUMELA IMISEBENZI NGESEVISI YE-PAXFUL, NOMA UKUTHI IZINDLELA ZOKUKHOKHA ZENKAMPANI YANGAPHANDLE KUWEBHUSAYITHI YETHU ZIYASEKELWA NGAMASEVISI WETHU. AKUFANELE USEBENZISE IZINDLELA ZOKUKHOKHA ZENKAMPANI YANGAPHANDLE NGE-PAXFUL UMA LEZO ZINKAMPANI ZANGAPHANDLE ZINGAYIVUMELI
UBOPHEZELEKE NGOKUPHELE UKUTHOBELANA NAYO YONKE IMITHETHO NOKULAWULA KWEZINDAWO LAPHO UMSEBENZI WAKHO WENZEKA KHONA.
Yonke imisebenzi kufanele yenzeke phakathi kwe-Paxful. Ukukhipha imisebenzi enkundleni ye-Paxful noma ukushintshisana ngemininingwane yokuxhumana yangaphandle kukhawulelwe.
Imikhawulo Yokudlulisela. Singahle, ngokuzikhethela kwethu, sibeke imikhawulo noma ukukhawulela kusayizi, uhlobo, noma indlela yeminye imisebenzi yokudlulisela, njengomkhawulo kwinani eliphelele laMafa Wedijithali angathunyelwa ukuthi athengiswe.
Asikho Isiqinisekiso. I-Paxful ayiqinisekisi ukuthi uzokwazi ukuthengisa Amafa Wedijithali Endaweni Yokumaketha yayo. Isenzo sokuthenga noma sokuthengiswa kwaMafa Wedijithali ngeNdawo Yokumaketha ye-Paxful akuqinisekisi ukuthi uzokwazi ukuthenga noma ukuthengisa Amafa Wedijithali ngeNdawo Yokumaketha kamuva.
Ubudlelwano. Akukho kulesi Sivumelwano okuhloselwe futhi ngeke kudalwe ubudlelwano, inhlangano, ukuqalisa, ukusebenzela noma ukwethembeka, wena ne-Paxful ukuba nithobelane ngezinkontileka ezizimele.
Ukuqonda Kolwazi. Umela futhi uqinisekisa ukuthi ulwazi olunikezayo Ngamasevisi luqondile futhi luphelele. Wamukela futhi wazisa ukuthi i-Paxful ayibophezelekile kumaphutha noma ukukhipha okwenzayo okuxhumene nomsebenzi oqaliswe ngaMasevisi, isibonelo, uma uthayipha ngokungalungile ikheli leWalethi noma ukunikezela ngolwazi olungalungile. Sikukhuthaza kakhulu ukuthi ubuyekeze kahle imininingwane yomsebenzi wakho ngaphambi kokuqedela ngeSevisi.
Akukho ukukhansela noma Ukushintsha; Imisebenzi Yewalethi. Uma imininingwane yesevisi seyihanjisiwe kunethiwekhi yohlobo lwemali yedijithali ngokuthi Amasevisi, i-Paxful ayikwazi ukukusiza ngokukhansela noma ukushintsha umsebenzi wakho. I-Paxful ayinakho ukulawula kunethiwekhi yohlobo lwemali yedijithali futhi ayinawo amandla wokwenza ukukhansela noma ukushintsha izicelo. I-Paxful ayilondolozi noma ibeke Amafa Wedijithali akhiyiwe. Amafa Wedijithali ahlala arekhodwa kumanethiwekhi wawo noma ama-blockchains. Yonke imisebenzi yohlobo lwemali lwedijithali ivela ngaphakathi kwenethiwekhi yohlobo lwemali lwedijithali, hhayi ku-Paxful. Akukho ukuqinisekisa ukuthi umsebenzi uzocubungula kunethiwekhi yohlobo lwemali yedijithali. I-Paxful igodla ilungelo lokwenqaba ukucubungula umsebenzi uma kudingeka ngokomthetho noma uma sibona imisebenzi njengokuthi iphikisana nemigomo nemibandela yethu kulesi Sivumelwano. Wamukela futhi wazisa ukuthi uthatha isibopho esiphelele sayo yonke imisebenzi evela ngaphansi kweWalethi yakho futhi wamukela bonke ubungozi bokufinyelela okugunyaziwe noma okungagunyaziwe kuWalethi yakho, kufika lapho kuvunyelwe ngokomthethe.
Izintela. Kuyisibopho sakho ukucacisa, uma zikhona, izintela ezisebenza kumisebenzi lapho imininingwane yomsebenzi ohanjiswe ngaMasevisi, futhi kuyisibopho sakho ukubika nokukhokhela intela efanele kusiphathimandla sentela esifanele. Uyavuma ukuthi i-Paxful ayibophezelekile ukucacisa ukuthi ingabe izintela ziyasebenza kumisebenzi yakho yohlobo lwemali noma ngokuqoqa, ukubika, ukubamba noma ukukhokhela izintela ezivela kusuka kumisebenzi yohlobo lwemali yedijithali.
Ukuhlonipheka Komsebenzisi. Uma uzibandakanya kuMsebenzi, sivumela abasebenzisi ukunikezela ngempendulo ekuzibandakanyekeni nawe. Futhi sivumela abasebenzisi ukufayela imibiko uma abasebenzisi bakholwa ukuthi wephule lesi Sivumelwano ngenye indlela. Le mibiko iyimfihlo, kodwa singayisebenzisa ngokuxhumana nesiphikiso esichazwe eSigabeni 8.
Umlando Womsebenzi. Ungabuka umlando wakho womsebenzi nge-akhawunti yakho. Uyavuma ukuthi ukwahluleka kwaMasevisi ukunikezela ngokuqinisekisa okunjalo ngeke kulimaze noma kwenze kungaqinisekisi imigomo yomsebenzi onjalo.
I-Paxful Pay. I-Paxful igunyaze abanye abathengisi ukwamukela i-Paxful njengendlela yokukhokha ngokuthengwa kwempahla namasevisi ku-inthanethi (“Abathengisi Abagunyaziwe”). Ungakhokhela uMthengisi Ogunyaziwe ngokukhetha inketho “Paxful Pay” ekuphumeni noma ngesikhathi sokukhokha. I-Paxful Pay izokuqondisa eNdaweni Yokumaketha yethu ukuze ufinyelele Amafa Wedijithali atholakala ku-akhawunti yakho noma akuxhume kuMthengisi. Uma uthenga Amafa Wedijithali kusuka kuMthengi ukuze uqedele umsebenzi, imigomo ebekwe phambili eSigabeni 7.1 yalesi Sivumelwano izosebenza.
Ukuthengisa Impahla. I-Paxful ayibophezelekile kuzimpahla noma amasevisi owathengayo kusuka kuMthengisi Ogunyaziwe ngokusebenzisa i-akhawunti yakho noma umkhiqizo wokuthi we-Paxful Pay. Uma unesiphikiso ngoMthengisi Ogunyaziwe, kufanele uxazulule ukuphikisana ngqo noMthengisi Ogunyaziwe.
Ukubuya, Ukubuyiswa Kwemali. Uma uthenga impahla noma isevisi kusuka kwinkampani yangaphandle usebenzisa i-akhawunti yakho, kumanqamu. Asicubunguli ukubuyiselwa kwemali noma ukubuya. Umthengisi Ogunyaziwe angakunikezela ngokubuya, ikhredithi yesitolo noma ikhadi lesipho ngokuzikhethela nangokuya ngezinqubomgomo zayo.
I-Paxful ikhokhisa izindleko zaMasevisi, izindleko ezisebenzayo zizoboniswa ngaphambi kokuthi usebenzise iSevisi lapho inkokhelo isebenza khona. Bona okuthi “Izinkokhelo ze-Paxful” ngemininingwane ebanzi. Izinkokhelo zethu zikhonjelwe ukushintsha futhi i-Paxful igodla ilungelo lokulungisa intengo yayo nezinkokhelo noma kunini.
UKUPHIKISA UMSEBENZI NGENQUBO YOKUXAZULULA ISIPHIKISO YE-PAXFUL
Ukuphikisa Imisebenzi. Ezimweni eziningi, indlela elula yokuqeda ukuphikisana kungukuthi Abathengisi naBathengi baxoxisane, basebenzisane ukuthola okwenzekile, futhi beze nesixazululo sokuvumelana. Uma uMthengi noMthengisi bangakwazi ukuvela nesixazululo sokuzwana, iqembu losekelo lwe-Paxful (“Ukweseka Kwe-Paxful”) lingasiza. Enye nenye inhlangano ingaqalisa inqubo yokuxazulula ukuphikisa (“umsebenzi ophikiswayo” noma “ukuphikisa”) ngokuqondene nomsebenzi. Iziphikiso zingaqaliswa kuphela kumisebenzi emakwe njengokuthi ikhokhelwe ngokuphelele uMthengi. Imisebenzi engamakiwe ngokuthi ikhokhwe ngokuphelele uMthengi, ekhanselwe uMthengi, ekhanselwe ngokuzenzakalelayo ngenxa yokuphela kwesikhathi okubekwe phambili kumnikelo, esivele iphikisiwe nexazululiwe lapho uMthengisi ekhulule Amafa Wedijithali kuMthengi ngokuvamile akukwazi ukuphikiswa, kubuyiselwe emuva, noma kushintshiwe.
Inqubo Yesixazululo Sokuphikisa. Ngezansi izinyathelo lezo Usekelo lwe-Paxful ezithathayo esimweni sokuphikisa.
Ungaqalisa ukuphikisa ngokungena ngemvume ku-akhawunti yakho ye-Paxful, uvule umsebenzi ongathanda ukuwuphikisa bese ukhethe inkinobho ethi “phikisa”. Inkinobho ethi “phikisa” izobonakala isebenza kuphela uma umsebenzi umakwe njengokuthi kukhokhwe ngokuphelele uMthengi. Uma usuqalise ukuphikisa, uzokhetha uhlobo lokuphikisa kusuka kuzinketho ezethuliwe futhi uchaze inkinga ngokunika ukukhula ekuphikiseni kwakho.
Izinketho ezethuliwe zokuchaza ukuphikisa kwakho uma unguMthengisi zingezilandelayo:
I-Coinlocker (okungukuthi uMthengi ongaphenduli) – uMthengi umake umsebenzi njengokhokhelwe ngokuphelele, kodwa akaphenduli futhi akasebenzi.
Ukukhipha inkokhelo – uMthengi uyasebenza futhi uzamile ukukhokha, kodwa kunezinkinga ngenkokhelo.
Okunye – inketho evulekile lapho ungachaza khona ukuthi iyiphi inkinga edale isiphikiso. Umthengi uzokwazi ukubuka incazelo yakho.
Izinketho zethulelwa ukuchaza ukuphikisa kwakho uma ungumthengi njengokulandelayo:
Umthengisi ongaphenduli – ukhokhile, kodwa uMthengisi akaphenduli futhi akasebenzi.
Inkinga yokukhokha – wenzile inkokhelo, kodwa uMthengisi uthi kunezinkinga ngenkokhelo futhi wenqaba ukukhulula Amafa Wedijithali.
Okunye – inketho evulekile lapho ungachaza khona ukuthi iyiphi inkinga edale isiphikiso. uMthengisi uzokwazi ukubuka incazelo yakho.
Uma isiphikiso sesihanjisiwe, Ukweseka kwe-Paxful kuzonikeza enye inhlangano isaziso nge-imeyili nangokuthumela umlayezo ngesici sengxoxo esitholakalayo kuBathengi naBathengisi eNdaweni Yokumaketha ukushintsha inhlangano enjalo ukuthi isiphikiso siqalisiwe. Uma omunye wemisebenzi yakho uyaphikiswa, Ukweseka kwe-Paxful kuzokutshela ukuthi yimuphi umsebenzi ophikiswayo nokuthi kungani umsebenzi uphikiswa.
Buyekeza isiphikiso futhi unikezele Ukweseka kwe-Paxful ngencazelo yokuthi kwenzeke ini. Bandakanya ubufakazi onabo ukweseka incazelo yakho, njengesiqinisekiso senkokhelo, isiqinisekiso sobunikazi noma isiqinisekiso sokuthi awuyitholanga inkokhelo.
Imisebenzi ephikisiwe izophenywa Ukweseka kwe-Paxful futhi isinqumo sizokwenziwa ngokususelwe ebufakazini obunikezelwe izinhlangano zombili. Ukweseka kwe-Paxful kuxazulula ukuphikisa ngokuhlaziya izinto ezahlukahlukene njengoba kuchaziwe ngezansi eSigabeni 8.
Ukubuyekeza Ukupikisa. Phakathi nokubuyekeza ukuphikisa, Ukweseka kwe-Paxful kungakunika imiyalo odinga ukuyilandela. Imiyalo enikwe kuwe ingadinga ukunikezela ubufakazi obungeziwe, njengokuqinisekiswa kwe-ID, ukuqinisekisa kwenkokhelo, noma yisiphi isithombe, umsindo, noma ukuqinisekisa kwevidiyo, noma amanye amadokhumenti abonwa aphathelene ne-Paxful futhi ingadinga ukuthi unikezele ngobufakazi obunjalo esikhathini esithize. Ukwahluleka ukulandela imiyalo kungaholela ukuthi ukuphikisa kuxazululwe ngokumelene nawe. Ukwesekwa kwe-Paxful kuzonikezela ngesaziso sesinqumo sayo ngesici sengxoxo yomsebenzi eNdaweni Yokumaketha ezinsukwini ezingu-30 zokuthola ukuphikisa, kodwa kwezinye izimo, kungathatha isikhathi eside.
Ukungaphenduli. Uma ubandakanyeka emsebenzini, kubalulekile ukuthi uhlale usebenza futhi utholakale kusuka ekuqaleni komsebenzi kufika lapho umsebenzi uqedelwa, ukhanselwa, noma uxazululwe. Lokhu kusho ukuthi kufanele ukwazi ukunikezela ngempendulo esicelweni Ngokweseka kwe-Paxful emsebenzini ophikisiwe esikhathini esithile esicaciswe Ukweseka kwe-Paxful noma ungabonwa njengongaphenduli futhi isiphikiso singaxazululwa ngokubhekana nawe.
Izinkokhelo zasemuva. Inhlangano ingabhekana nobungozi obungeziwe kuye ngendlela yokukokha esetshenziselwe umsebenzi ngisho noma inqubo yesixazululo sesiphikiso se-Paxful sivumelana naleyo nhlangano. Inqubo yesixazululo sokuphikisa ebekwe phambili kulesi Sivumelwano yehlukile kokunye ukulungisa Umthengi noma Umthengisi angabanayo endleleni yokukhokha esetshenziswe ngokuxhumene nomsebenzi. I-Paxful ayiboshezelwe ukuqalisa noma ukuphatha izinkokhelo zasemuva futhi ayiboshezelwe uma inhlangano ibuyisela emuva, ikhokhisa emuva, noma iphikisa umsebenzi ngendlela eyenziwe yatholakala enhlanganweni ngendlela yokukhokha esetshenzisiwe emsebenzini, kufaka phakathi ngemuva kokuvalwa kokuphikisa.
Isixazululo Sokuphikisa. Umsebenzi ophikisiwe ngokuvamile uxazululwa Ukweseka kwe-Paxful ukuhambisa Amafa Wedijithali kukhonjelwe kusiphikiso kuMthengi noma uMthengisi womsebenzi ophikisiwe uma inqubo yesixazululo sokuphikisa iqediwe.
Ngezansi kuyizimo ezikhethiwe ukukunikezela ngolwazi lokuthi i-Paxful ingawuxazulula kanjani umsebenzi ophikisiwe. Lokhu akuhloselwe ukuba uhlu olude. Isixazululo sanoma isiphi isiphikiso sizothintwa izinto ezithile zesiphikiso nobufakazi obunikezelwe umsebenzisi.
Ukwesekwa kwe-Paxful kungaxazulula ukuphikisa ngokuvumelana noMthengi uma okungenani inqubo eyodwa yokulandelayo ihlangabezwa:
Umthengi yenze inkokhelo ngokuya ngemiyalo yokuqala enikezelwe uMthengi ngokuqalisa umsebenzi futhi uMthengi wanikezela ngobufakazi obuphelele ukuthi inkokhelo yenziwe ngokuya ngemiyalo. Kungukuphula lesi Sivumelwano kuMthengisi ukwenqaba ukuqedela umsebenzi uma uMthengi sekaqinisekise yonke imigomo nemibandela yoMthengisi njengoba kuthunyelwe ngesikhathi uMthengi amukela futhi akhokhela umsebenzi.
Umthengisi akaphendulanga futhi akanikezelanga ngempendulo ngesikhathi esicelwe Ukwesekwa kwe-Paxful.
Inkokhelo yenziwe kwinhlangano yangaphandle kumsebenzi noma inkokhelo yenziwe ku-akhawunti engabhalisiwe egameni loMthengisi.
Ukwesekwa kwe-Paxful kungaxazulula ukuphikisa ngokuvumelana noMthengisi uma eyodwa yezinqubo ezilandelayo zihlangabezwa:
Umthengi akanikezelanga ngenkokhelo, akanikezelanga ngenkokhelo ephelele noma akanikezelanga ngenkokhelo ngokuya ngemiyalo yokuqala enikezelwe uMthengisi ekuqaleni komnikelo womsebenzi.
Inkokhelo eyenziwe uMthengi ibanjiwe, imiswe okwesikhashana, iqinisiwe noma imiswe umnikezelo noma umqubunguli wenkokhelo. Lokhu kubandakanya izimo lezo uMthengi azikhokhele emuva noma aphikise inkokhelo ngebhange noma umkhiphi wekhadi lokukhokha.
Umthengisi akaphendulanga futhi akanikezelanga ngempendulo eyanele ngesikhathi esicelwe Ukwesekwa kwe-Paxful.
Inkokhelo yenziwe inhlangano yangaphandle kumsebenzi noma inkokhlo yenziwe kusuka kwi-akhawunti engabhalisiwe egameni loMthengi.
Uma uMthengi noma uMthengisi womsebenzisi ophikisiwe unikezela ngolwazi lobugebengu noma amadokhumenti obugebengu noma wenza izimangalo noma usebenzisa amacebo alahlekisayo, isiphikiso singaxazululwa ngokushesha ngokuphikisana nomsebenzisi onjalo futhi i-akhawunti yalowo msebenzisi ingamiswa okwesikhashane noma ipheliswe ngokuzikhethela Kokweseka kwe-Paxful.
Kwezinye izimo lapho inhlangano ihlangabezana nenqubo, noma akucacile ngandlela thize noma akwenzeki ukucacisa ukuthi iyiphi inhlangano ehlangabezane nesixazululo sokuphikisa enkethweni ezimele ye-Paxful, i-Paxful inganquma ukuxazulula ukuphikisa ngokwahlukanisa Amafa Wedjithali ngokukhonjelwe ekuphikiseni okuphakathi koMthengisi noMthengi ngokulingana noma ngokungalingani.
Isikhalazo. Uma ukholwa ukuthi i-Paxful ixazulule ukuphikisa ngendlela engahambelani nalesi Sivumelwano, unelungelo lokucela ukukhalaza. Ukuze ucele ukukhalaza, udinga ukusazisa ngokusibhalela uxhumane nathi ekusekweni kwekhasimende kwe-Paxful kungakadluli izinsuku zekhalenda ezingu-10 ngemuva kokuthi isinqumo soKweseka se-Paxful silethiwe kuwe futhi usinikezele ngemininingwane eyanele nobufakazi obusekela isimo sesicela sakho. Isikhalazo sakho kufanele sikhombe ngokuqondile indlela okholwa ngayo ukuthi i-Paxful ixazulule ngokungalungile ukuphikisa ngokuya ngemigomo yalesi Sivumelwano futhi unikezele ngobufakazi besinqumo esingalungile esinjalo.
Sicela ukhumbule ukuthi noma ngabe phakathi nenqubo yokuphikisa noma evamile noma ngasiphi isikhathi uma usebenzisa Amasevisi, uboshezelwe ukugcina inkulumo efanele futhi uhloniphe abanye abasebenzisi noKweseka kwe-Paxful. Bona okuvamile, “Isigaba 13 - Ukusebenzisa Okuvinjelwe”.
Isiphetho. Uyazisa futhi uyavuma ukuthi isinqumo se-Paxful mayelana nesiphikiso kuyisiphetho, esokugcina futhi siyabophezela njengoba kuchaziwe kulesi Sivumelwano. I-Paxful ngeke ibophezeleke kuMthengi noma uMthengisi ngokuxhumene nezinqumo zakhe.
IZINKOKHELO ZOKUSEBENZISA AMASEVISI WE-PAXFUL
ALIKHO ILUNGELO LOKUKHANSELA AMASEVISI NOMA IZINKOKHELO ZEMAYINI
Uma usebenzisa Isevisi lawo indleko isebenza khona, noma uqalisa umsebenzi ngenkokhelo yemayini ngamaSevisi, ngeke ufaneleke ukubuyiselwa kwemali noma isinxephezelo uma usuqinisekisile ukuthi ufisa ukuqhubeka ngeSevisi noma umsebenzi.
Thina, ngokuzikhethela futhi ngaphandle kokuthi ukhokhe, ngesaziso noma ngaphandle kwaso futhi noma kunini, singashintsha noma sinqamule, okwesikhashane noma unaphakade, noma enye ingxenye yamaSevisi wethu.
UKUMISWA OKWESIKHASHANA NOMA UKUNQANYULWA KWAMASEVISI NE-AKHAWUNTI; UKUKHAWULELA UKUFINYELELA KUWALETHI YAKHO
Ngokuzikhethela kwethu futhi okuzimele, ngokushesha futhi ngaphandle kwesaziso: (a) singamisa okwesikhashana, sikhawulele, noma sinqamule ukufinyelela kwakho kunoma yimaphi noma wonke Amasevisi (kufaka phakathi ukukhawulela ukufinyelela kwakho kuWalethi), kanye/noma (b) ukuyekisa ukusebenza noma ukukhansela i-akhawunti yakho uma: (i) sidinga ukuthi senze kanjalo ngokomthetho osebenzayo, umyalo wenkantolo, noma umyalo obophezelayo wesiphathimandla sikahulumeni; (ii) sisola ukuthi kungenzeka noma wenze ukwaphula kwalesi Sivumelwano; (iii) ukusetshenziswa kwe-akhawunti yakho kukhonjelwe ubufakazi obulindile, ukuphenya, noma izinqubo zikahulumeni kanye/noma sibona ubungozi obukhulayo bokungathobelani nomthetho obuphathelene nomsebenzi we-akhawunti yakho; (iv) ozakwethu besevisi abakwazi ukweseka ukusetshenziswa kwakho; (v) uthatha isinyathelo esisibona njengokubalekela ukulawula kwethu noma izinqubo zethu noma (vi) sicabanga ukuthi kubalulekile ukwenza kanjalo ukuvikela thina, abasebenzisi bethu, kufaka phakathi wena, abasebenzis bethu kusuka engozini noma ukulahlekelwa. Uma sisebenzisa amalungelo wethu wokukhawulela noma wokwenqaba ukufinyelela kwakho kokuthi amaSevisi, ngeke sibophezeleke emiphumeleni wokwenqaba ukunika ukufinyelela kokuthi amaSevisi, kufaka phakathi ukubambezeleka, ukulimala noma ukungalungi ongahle uhlangabezane nabo.
Uma simisa okwesikhashana i-akhawunti yakho, sinqamula ukusetshenziswa kokuthi amaSevisi nganoma isiphi isiszathu, noma ukukhawulela ukufinyelela kwakho kuWalethi, sizozama ukukunikezela ngesaziso sezenzo zethu ngaphandle umyalo wenkantolo noma enye inqubo yezomthetho isivikela ukuthi sikunikezele ngesaziso esinjalo. UYAZISA UKUTHI ISINQUMO SETHU SOKUTHATHA IZINYATHELO EZITHILE, KUFAKA PHAKATHI UKUKHAWULELA UKUFINYELELA, UKUMISA KANCANE, NOMA UKUVALA I-AKHAWUNTI YAKHO NOMA IWALETHI, KUNGASUSELWA ENQUBENI EYIMFIHLO EBALULEKILE EKUPHATHENI KWETHU KOBUNGOZI NAMAPHROTHOKHOLI WOKUVIKELA. UYAVUMA UKUTHI I-PAXFUL AYIBOSHEZELWE UKUDALULA IMINININGWANE YOKUPHATHA UBUNGOZI NEZINQUBO ZOKUPHEPHA KUWE. Esimweni lapho simisa kancane i-akhawunti yakho noma ukufinyelela kuWalethi yakho, sizosusa ukumiswa ngokushesha uma izizathu zokumisa zingasekho, kodwa asibophezelekile ukukwazisa ukuthi (uma kukhona) ukumisa okunjalo kuzosuswa nini.
Uma uphethe Amafa Wedijithali ku-Paxful Wallet yakho futhi ungekho umsebenzi ku-akhawunti yakho isikhathi esichazwe umthetho osebenzayo, singadinga ukubika Amafa Wedijithali anjalo ku-akhawunti yakho njengalawo angamangalelwe ngokuya ngemithetho yokulahla nokungasebenzisi. Uma lokhu kuvela, sizosebenzisa imizamo ebonakalayo ukunikezela ngesaziso esibhaliwe kuwe. Uma wehluleka ukuphendula kusaziso esinjalo ezinsukwini zebhizinisi eziyisithupha (7) zokuthola, noma uma kudingeka ngokomthetho, singadinga ukuletha Amafa Wedijithali anjalo kusiphathimandla esisebenzayo njengento engamangalelwe. Sigodla ilungelo lokuthatha inkokhelo yokuqondisa kusuka Kumafa Wedijithali angamangalelwe njengoba kuvunyelwe ngokomthetho.
Uma ufinyelela noma usebenzisa Amasevisi, uyavuma ukuthi uzosebenzisa Amasevisi ngokuya ngemigomo nemibandela kulesi Sivumelwano (kufaka phakathi Inqubomgmo Yobumfihlo) nokungenzi isenzo esingekho emthethweni, nokuthi ubophezelekile esenzweni sakho ngenkathi usebenzisa Amasevisi wethu. Ngaphandle kokukhawulela ukuvama kokuqhubeka, uyavuma ukuthi ngeke:
usebenzise Amasevisi ngendlela engaphazamisa, ithinte, ithinte ngokungalungile noma iqhaphazele abanye abasebenzisi ukuthi bajabulele Amasevisi ngokuphelele, noma engalimaza, ikhubaze, igcwalise noma ithinte ukusebenza Kwamasevisi wethu ngenye indlela;
uzibandakanye komunye umsebenzi ongaphula, noma usize ukwaphula, eminye imithetho, ukuthobela, noma ukulawula, izinhlelo zokuvimbela ezenziwe emazweni lapho senza khona ibhizinisi noma imisebenzi, noma engabandakanya izinqubo zomsebenzi ongekho emthethweni; ukushicilela, ukusabalalisa, noma ukuthuthukisa izinto noma ulwazi olungekho emthethweni;
uphazamisane nokufinyelela komsebemsebenzisi noma ukusebenza Kwamasevisi wethu; ukwehlisa, ukungasebenzisi kahle, ukuqhaphaza, ukuhlukumeza, ukuhlasela noma ngenye indlela ephula amalungelo asemthethweni (okufana, kodwa kungakhawulelwe, amalungelo wobumfihlo, wesidlangalaleni noma wento yohwebo) yabanye abasebenzisi; ukukhuthaza; ukusongela, ukwenza, ukuthuthukisa, noma ukukhuthaza inzondo, ukungabekezelani ngokobuhlanga, noma izenzo zodlame kwabanye, ukuvuna noma ukuqoqa ulwazi kusuka kuWebhusayithi yethu ngabanye abasebenzisi;
ukuzibandakanya komunye umsebenzi wobugebengu, ukwehlisa noma ukubangela ukulimala ku-Paxful noma abasebenzisi bethu; noma ukunikezela ngolwazi olungamanga, olungaqondile noma olulahlekisayo ku-Paxful noma komunye umsebenzisi ngokuxhumene namaSevisi wethu noma ukunikezela noma ukucela ukuqalisa kulesi Sivumelwano;
ukwethula kokuthi Amasevisi igciwane, i-Trojan, izibungu, amabhomu wengqondo noma omunye umsebenzi olimazayo; ukusebenzisa irobothi, ufezela, okuhamba phansi, i-scraper noma ezinye izindlela noma ukuphazamisa okunganikeziwe yithi kokuthi Amasevisi wethu noma ukuthatha idatha; ukuzama ukufihla amanye amacebo wokuhlunga esiwasebenzisayo, noma umzamo wokufinyelela isevisi noma indawo yokuthi Amasevisi wethu ongavunyelwe ukuwafinyelela; noma ukufinyelela; noma ukubeka noma yikuphi ngaphakathi Kwendawo Yokumaketha ye-Paxful yokunye ukukhangisa noma ukuthuthukisa okungenza ukuthenga nokuthengisa Amafa Wedijithali ngaphandle Kwamasevisi we-Paxful;
ukuzibandakanya emisebenzini efaka phakathi izinto ezephula ilungelo lobunikazi, uphawu lokuhweba, ilungelo lesidlangalaleni noma lobumfihlo noma elinye ilungelo ngaphansi komthetho, noma ezinye izinto zelayisense ngaphandle kokugunyaza okufanele kusuka kumphathi wamalungelo; ukusetshenziswa kwento ye-Paxful, igama, noma ilogo, kufaka phakathi ukusetshenziswa kwezimpawu zokuhweba noma amasevisi we-Paxful, ngaphandle kwemvume ebhaliwe kusuka kithi noma ngendlela engalimaza i-Paxful noma ibhrendi ye-Paxful; noma yisiphi isenzo esisho ukuncoma okungelona iqiniso noma ukusebenzisana ne-Paxful; noma ukwenza ezinye izinhlelo zenkampani yangaphandle esebenzisana namaSevisi wethu ngaphandle kwemvume ebhaliwe; noma
ukukhuthaza noma ukufaka enye inkampani zangaphandle kumisebenzi evinjelwe ngaphansi kwalesi Sigaba 13.
Sikunika ilayisensi elikhawulelwe, elingakhethekile, elingadluliseki, elikhonjelwe kumigomo nemibandela kulesi Sivumelwano, ukufinyelela nomsebenzisa Amasevisi, iWebhusayithi, nokuqukethwe okuphathelene, imisebenzi, ulwazi (ngokuqoqiwe, “Okuqukethwe”) ngokuzikhethela ngezinhloso ezivunywe i-Paxful njalo. Okunye ukusebenzisa kweWebhusayithi noma Okuqukethwe kuvinjelwe nawo wonke amalungelo, isihloko, intshisekelo, kokuthi Amasevisi, iWebhusayithi noma Okuqukethwe kuyinto ye-Paxful. Uyavuma ukuthi ngeke ukopishe, udlulise, usabalalise, uthengise, ulayisense, ugodle ukulungisa, ukushintsha, ukushicilela, noma ukubamba iqhaza ekudluliseleni noma ukuthengiswa, kwemisebenzi edaliwe, noma ngenye indlela eqaphaza Okuqukethwe, konke noma ingxenye ngaphandle kwemvume ebhaliwe ye-Paxful. Ungakopishi, ulingise noma usebenzise uphawu lokuhweba le-Paxful, izimpawu ezibhalisiwe, amalogo noma okunye kwento yobuhlakani ngaphandle kwemvume ebhaliwe ye-Paxful.
Ngisho noma sihlose ukunikezela ngolwazi oluqondile futhi ngesikhathi kuWebhusayithi ye-Paxful, ye-Webhusayithi yethu (kufaka phakathi, kungakhawulelwe, Okuqukethwe) ngeke kuhlale kuqondile, kuphelele noma kungokwamanje futhi kungabandakanya ukungaqondi kwezokusebenza noma amaphutha wokuthayipha. Emzameni wokuqhubeka nokukunikezela ngolwazi oluphelele futhi oluqondile, ulwazi lungashintshwa noma lubuyekezwe njalo ngaphandle kwesaziso, kufaka phakathi kodwa kungakhawulelwe ulwazi mayelana nezinqubomgomo zethu, imikhiqizo kanye namaSevisi. Ngokufanele, kufanele uqinisekise lonke ulwazi ngaphambi kokuthi uthembele kulo, futhi zonke izinqumo ezisuselwe kulwazi oluqukethwe kuWebhusayithi ye-Paxful ziyisibopho sakho futhi ngeke sibophezeleke ezinqumeni ezinjalo. Ulwazi olunikezelwe izinkampani zangaphandle olwezinhloso zolwazi kuphela futhi i-Paxful ayimeli ukuqinisekisa ekuqondeni kwalo. Amalinki emisebenzini yenkampani yangaphandle (kufaka phakathi ngokungakhawulelwe, amawebhusayithi) lunganikezelwa njengokulunga kodwa alulawulwa yithi. Uyazisa futhi uyavuma ukuthi asibophezelekile enye into yolwazi, okuqukethwe, noma Amasevisi aqukethwe emisebenzini yenkampani yangaphandle noma amanye amasayithi afinyelelekayo noma axhunywe neWebhusayithi ye-Paxful.
IMPENDULO NOKUHANJISWE UMSEBENZISI
I-Paxful ihlala ifuna ukuthuthukisa Amasevisi wayo neWebhusayithi. Uma unemibono noma iziphakamiso mayelana nokuthuthukisa noma okungeziwe kuMasevisi we-Paxful noma iWebhusayithi, i-Paxful ingathanda ukuzwa kusuka kubo; kodwa, okunye ukuhambisa kuzokhonjelwa kumigomo nemibandela kulesi Sivumelwano.
Akukho simo lapho ukudaluleka kwanoma yimuphi umbono noma ukuphawula, noma nanoma yiziphi izinto ezihlobene ne-Paxful noma abangaphansi kwayo, abazali, izinkampani ezixhumene naye, noma nanoma yiziphi izikhulu zayo, abaqondisi, abaphathi, amalungu, abaninimasheya, izisebenzi nama-ejenti, noma nanoma yiziphi izindlalifa, abalandelayo esikhundleni, abameleli nababelwe (ngamunye ubizwa "Ngenhlangano Ye-Paxful" uma ziziningi "Yizinhlangano Ze-Paxful") kuyoba ngaphansi kwesibopho sobumfihlo noma ukulindela ukunxeshezelwa.
Ngokuhambisa umbono noma impendulo noma omunye umsebenzi ophathelene kuzokhonjelwa kumalungelo wobuhlakani (“Umsebenzi”) ku-Paxful noma i-Paxful Party, oyinika ku-Paxful, ngokuhlonipha Umsebenzi ohanjisiwe, ongakhethekile, ongashintshi, ilayisense lomhlaba lokusebenzisa konke okuqukethwe kombono nempendulo enjalo, ngezinye izinhloso. Ngokuthuthukile, ususa noma yiliphi ilungelo ngokuphelele elivunyelwe ngaphansi kwemithetho ye-United States ongabanalo kokuthi Umsebenzi futhi elimela futhi liqinisekise i-Paxful Party ukuthi Umsebenzi uvela kuwe, ukuthi akekho omunye onamalungelo kokuthi Umsebenzi nokuthi yonke i-Paxful Parties imahhala ukufaka Umsebenzi nokusebenzisa umsebenzi ophathelene uma kudingeka, njengoba kunikeziwe noma njengoba kushintshiwe i-Paxful Party, ngaphandle kokuthola imvume noma ilayisensi kusuka kwinkampani yangaphandle.
Wamukela ngokuthuthukile ukuthi i-Paxful ingalayisensa noma iyiphi i-Paxful Parties ukusebenzisa ngenye indlela Umsebenzi owuhambisile.
Sinelungelo lokususa noma yikuphi okuthumele ongakwenza kuWebhusayithi, ngokuzikhethela kwethu, ngaphandle kokuxwayisa noma izizathu.
UXHUMANA NATHI KANJANI
Sincoma ukuthi uvakashele ikhasi le-FAQ ngaphambi kokuxhumana nathi. Esimweni ikhasi le-FAQ lingaqukethe ulwazi olufunayo, i-Paxful inikezela ngosekelo olungu-24/7. Ungaxhumana nathi ngewijethi yethu yosekelo esekhasini le-FAQ.
Ngeke sibophezeleke ekubambezelekeni, ukwahluleka ukusebenza noma ukuphazamiseka kweSevisi okuvela ngqo noma ngokungaqondile embangeleni noma esimweni esingaphezu kwethu sokulawula, kufaka phakathi kodwa kungakhawulelwe, ububanzi bemakethe obubalulekile, noma ukubambezeleka noma ukwahluleka ngendla yesenzo sikaNkulunkulu esivamile noma seziphathimandla zamasosha, isenzo samaphekula, ukuphazamiseka okuvamile, impi, ukuteleka noma okunye ukuphikisa komsebenzi, umlilo ukuphazamiseka kwezokuxhumana noma amasevisi we-inthanethi noma amasevisi womhlinzeki wenethiwekhi, ukwahluleka kwesisetshenziswa kanye/noma isofthiwe, olunye ubhubhane noma isimo esingaphezu kokulawula kwethu futhi ngeke kuthinte ukutholakala nokuphoqeleleka kokunye okusele.
Lesi Sivumelwano sihlanganisa sonke isivumelwano phakathi kwakho ne-Paxful ngokukhonjelwe kumigomo nemibandela kulesi Sivumelwano futhi lesi Sivumelwano sikhansela futhi simiselela okunye ukuqonda kwangaphambilini nezivumelwano phakathi kwakho ne-Paxful njengalokho okunakwayo. Unganiki amanye amalungelo wakho noma izibopho ngaphansi kwalesi Sivumelwano ngaphande kwemvume yethu ebhaliwe.